Maninona ny marketing tsy fivadihana no manampy ny asa hahomby? Martech Zone
Hatrany am-piandohana, ny programa valisoa ho an'ny tsy fivadihana dia nanjary fari-pahaizana manokana. Ny tompona orinasa, mitady hampiroborobo ny fifamoivoizana, dia handrotsaka ny isan'ny varotra azy ireo hijerena izay vokatra na serivisy izay sady be mpitia no mahasoa manolotra tolotra maimaimpoana. Avy eo, nalefa tany amin'ny magazay fanaovana pirinty teo an-toerana ny nanao pirinty karatra punch ary vonona ny hozaraina amin'ny mpanjifa.
Paikady voaporofo fa mahomby, porofoin'orinasa maro amin'ireo orinasa kely sy salantsalany (SMBs) no mbola mandray io fomba fanao amin'ny paikadin'ny teknolojia ambany io, ary io fomba fanao manokana io no mijanona ao am-pon'ny ny andiany manaraka amin'ny programa tsy fivadihana nomerika. Ny hany maha samy hafa azy dia ny programa momba ny tsy fivadihana nomerika — ny tsara indrindra farafaharatsiny — manome fotoana ahazoana tombony lehibe kokoa na dia mampihena ny fotoana sy ny vidiny mifandraika amin'ny fomba teknolojia ambany aza.
Tranga iray manandanja tsara dia ny fomba nampidirin'i Susan Montero, mpampianatra amin'ny ambaratonga faharoa ao Coral Springs, Florida, programa fahatokisana nomerika ao an-dakilasy. Tsy ny tranga fampiasana mahazatra ny fomba mety antenaina hampiasana programa valisoa ho an'ny tsy fivadihana, fa amin'ny fotony, i Montero dia miatrika fanamby mitovy amin'ny tompon'orinasa na aiza na aiza: ny fomba hanentanana ny mpihaino kendrena hiseho sy hamita kendrena zavatra. Sendra ny mpianatra no kendren'ny mpihaino an'i Montero fa tsy ny mpanjifa, ary ny hetsika kendrena tadiavina dia ny fivadihan'ny kilasy fa tsy ny fividianana.
Noho ny fahafaha-mandanjalanja amin'ny programa fahatokisana dizitaly, Montero dia afaka nanatanteraka mora foana ny programa valisoa ho an'ny filany manokana, manomboka amin'ny famoronana valisoa sy ny fampiharana azy. Miaraka amin'ny fandaharam-pidiany tsy mivadika, ny mpianatra dia mahazo isa tsy mivadika amin'ny fisehoana amin'ny fotoam-pianarana sy amin'ny famadihana ireo fotoam-pianarana amin'ny na alohan'ny daty voatondro.
Azon'ny mpianatra atao ny manavotra ireo teboka tsy fivadihana ireo ho valisoa, izay noforonin'i Montero tamina fomba fanao ambaratonga. Ho an'ny teboka fahatokisana dimy dia afaka mahazo pensilihazo na famafana ny mpianatra. Ho an'ny isa 10, afaka mahazo tombontsoa mihaino mozika na mahazo sakafo maivana maimaim-poana izy ireo. Ary ho an'ireo mpianatra manangona ny isa azony, dia afaka mahazo pass pass any an-trano sy pass de crédit fanampiny ho an'ny 20 sy 30 isa avy izy ireo.
Miavaka ny valin'ny programa Montero. Ny tsy fisian'ny nihena 50 isan-jato, ny tardies dia nihena 37 isan-jato, ary angamba ny tena zava-dehibe kokoa, ny kalitaon'ny asan'ny mpianatra dia tsara kokoa, porofom-pinoana marina momba ny tsy fivadihan'i Montero natsangana niaraka tamin'ny mpianany. Rehefa nametraka izany izy,
Ny mpianatra dia mamita ny asa fotsiny amin'ny finiavana bebe kokoa rehefa valisoa nomen'ny fahatokiana.
Ny asehon'ny tranga fampiasan'i Montero (sy ny fahombiazany) dia ny fahombiazan'ny programa tsy fivadihana nomerika raha manome ny mpampiasa ny fahafaha-manao izay ilainy hanamboarana azy ireo amin'ny filany, avy hatrany amin'ny boaty. Io fomba fahandro io ihany ho an'ny fahombiazana izay azo ampiasaina amin'ny SMB, hanararaotana ny fanolorana vokatra tsy manam-paharoa sy ny tobin'ny mpanjifa, izay azo antoka fa manana nuances sy quirks manokana.
Manokana, ny programa momba ny tsy fivadihana nomerika dia mamela ny SMB:
mamorona valisoa manokana mifanaraka amin'ny fanoloran'izy ireo marika sy vokatra
Omeo ny mpanjifany fomba maro hahazoana teboka tsy fivadihana, na amin'ny isan'ny fitsidihana, dolara laniana, na koa amin'ny fizarana ireo haino aman-jery sosialy an'ny orinasa
Streamline ny fizahana amin'ny fizahana sy fanavotana amin'ny alàlan'ny fampiasana takelaka fahatokisana na fitaovana POS mifangaro
Tanteraho fampielezan-kevitra kendrena amin'ireo ampahan'ny mpanjifa manokana, toy ny fisoratana anarana vaovao, mpanjifa mankalaza fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ary ireo mpanjifa lesona izay mbola tsy nitsidika fotoana voafaritra mialoha
Manitatra ny tratran'izy ireo amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny programa momba ny fahatokisana fampiharana finday mpanjifa
jereo Analytics amin'ny fizahana tsy fivadihana sy fanavotana mba hahafahan'izy ireo manatsara ny fandaharan'izy ireo rehefa mandeha ny fotoana hahazoana tombony azo antoka
ho azy manafatra mpikambana ao amin'ny programa tsy fivadihana ao amin'ny tahirin-kevitr'izy ireo mba hahafahan'izy ireo manatona ny lisitry ny mpanjifa mitombo hatrany miaraka amina fampielezan-kevitra kendrena
Ny fandaharam-pinoana tsy fivadihan'ny taranaka ankehitriny dia feno sy matanjaka lavitra noho ny fomba karatra totohondry taloha, ary manaporofo izany ny valiny, na amin'ny sekoly ambaratonga faharoa na SMB nentim-paharazana. Ohatra, ny Pinecrest Bakery any Pinecrest, Florida, dia nahita ny fidiram-bolan'izy ireo mitombo 67,000 $ mahery tamin'ny taona voalohany nampiharana ny programa fahatokisana nomerika azy ireo. Niitatra tamin'ny toerana 17 ny orinasam-pianakaviana ankehitriny ary mijanona ho vato fehizoro amin'ny maodelin'izy ireo ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny nomerika.
Betsaka ny mpanjifanay no tonga hisakafo sy hisakafo maraina ary avy eo dia miditra hariva mba haka tolak'andro fa tsy hitsidika kafe na kafe hafa. Tena ankasitrahan'izy ireo ny valisoa fanampiny noho ny tsy fivadihan'izy ireo.
Victoria Valdes, Lehiben'ny Serasera misahana ny Serasera ao Pinecrest
Ohatra tsara iray hafa koa ny Baja Ice Cream any Fairfield, Kalifornia, izay nahita mitsambikina 300% ny vola azony ao anatin'ny roa volana voalohany amin'ny fampiharana ny programa. Ny orinasa kely dia matetika no niharan'ny fihenan'ny vanim-potoana tamin'ny fangatahana gilasy, saingy niaraka tamin'ny programa tsy fivadihana nomerika, dia afaka nihazona ny orinasa tsy tapaka sy nitombo izy ireo.
Ny fitomboantsika dia namaky ny tampon-trano.
Analy Del Real, Tompon'ny Ice Cream Baja
Ireo karazana valiny ireo dia tsy ivelany ihany koa. Izy ireo dia ao anatin'ny sehatry ny mety ho an'ny SMB na aiza na aiza. Ny hany tadiavina dia ny tapa-kevitra-ho-tena miaraka amin'ny fahaizan'ny programa tsy fivadihana nomerika mety hamaha ny varavarana mankany amin'ny fahombiazana.
Tags: Analy del realgilasy vympanjifa tsy mivadikaprograma tsy fivadihana nomerikafivarotana tsy fivadihanapinecrestBakery PinecrestsmbSusan MonteroVictoria Valdes
Manoratra atiny momba ny firaketana izay niova fo ho an'ny orinasa